Hetsika Rohy – Analamanga: “Mety ny fiverenana mihiboka “
“Mety ny fiverenana amin’ny fihibohana ho an’Analamanga sy ny fampiatoana ny fampianarana, fa tsy ampy ahazoana tena miatrika ny ady amin’ny Covid-19″, hoy ny fanambaran’ny Hetsika Rohy. Tolo-keviny, ny tokony hananganana vovonana hahazoan’ny mpiara-miombon’antoka rehetra mandray anjara amin’ny tolo-kevitra enti-miatrika ny valanaretina.Mila omena sehatra ny manampahaizana amin’ny fahasalamana, indrindra ireo mpikaroka/mpitsabo matihanina. Tokony hijery ny paikady ahazoana manamora sy mampihatra ny vahaolana aroson’ireo matihanina amin’ny fahasalamana ireo mpitarika ara-politika, indrindra ny eo amin’ny fitondrana fa tsy misalovana ny andraikiny.Tsy fandraisana andraikitra ary tsy rariny ny famelana hiady irery efa sahirana sy efa marary. Noho izany, atsahatra ny fandrisihana azy hitsabo tena any an-trano, ary akarina ny fahazoana mandray sy mitsabo marary amin’ny toeram-pitsaboana misy mpitsabo matihanina.Ilaina ny fangaraharanaApetraka ny fangaraharana amin’ny fitantanana. Efa tsara ny fampahalalam-baovao momba ny fitiliana sy ny fitsaboana. Andrasana ny tatitra mangarahara tsy an-kiato ny fampiasam-bola sy ny fitantanana ny fampitaovana ary ny fanampiana/fandraisana an-tanana ireo marefo.Tokony homena fahefana sy fahafaha-miasa manokana ireo rafitra mpanara-maso toy ny Fitsarana momba ny kaonty, ny Bianco… hanara-maso ny fanatanterahana ny asa. Mba hipaka any amin’ny tokony hampiasana azy tokoa ny enti-manana ary hahazo anjara ireo rafitra/olona tokony hisitraka ny fanohanana. Raisina sy jerena akaiky ny hanatanterahana ny soso-kevitry ny sehatra tsy miankina mba tsy hamonoana sy hahamaro ny very asa ary hanarenana ny toekarena.Mbola tsy ho ampy ny enti-manana na eo aza ireo fanampiana azo, hamafisina ny fepetra hanatsarana sy hampangarahara ny fitantanana. Noho izany, mba ho firaisankina ary hanamaivanana ny fiankinan-doha tafahoatra amin’ny any ivelany: iaingana ny hambom-pom-pirenena, ka apetraka ny rafitra (kaonty tokana) ahazoana manolotra an-tsitrapo fandraisana anjara amin’ny vonjiaina.R.Nd.L’article Hetsika Rohy – Analamanga: “Mety ny fiverenana mihiboka “ a été récupéré chez Newsmada.
Tsy hiara-mitantana amin’ny fitondrana, hono, ny mpanohitra. Izay indray izao no hoe malaza? Nefa mila fifanakalozan-kevitra amin’izany. Izany moa no inona? Nefa rehefa tsy omen-danja na tsy ekena na tsy tanterahina, ohatra, ny hevitry ny tena dia tezitra, mirintona, mitsikera, mankahala, manakorontana… Ahoana ihany e?Tsy efa karazana fiaraha-mitantana ve, ohatra, ny hoe fifanakalozan-kevitra isaky ny mihetsika? Na hakana hevitra sy hierana amin’ny mpanohitra sy ny mpanao politika avokoa izay atao rehetra… Inona intsony no ilàna ny fifidianana raha izany? Ny fifidianana no mametraka mazava ny olom-boafidy amin’izay sehatra izay.Ao anaty rafitra amin’ny alalan’izay fifidianana izay no ahazoana miady hevitra sy mandresy lahatra mazava sy milamina, arakaraka ny toerana azo. Izay no iadiana mafy hahazoana ny maro anisa eny anivon’ny Antenimierampirenena, raha te hohenoin-teny na tsy maintsy henoin-teny. Mety mahazo toerana minisitra aza amin’izany.Fa tsy ivelan’ny rafitra ara-dalàna mandrakariva no mihevi-tena ho tsy azo ialana, mampiaka-peo isaky ny mihetsika… Ekena, mila henoina ny hevitry ny vitsy anisa, na tsy ao anaty fanjakana aza. Samy tompon-tanindrazana, saingy tsy voatery ekena na tanterahina izay lazainy. Ny an’iza koa no hoe tanterahina amin’izany?Ekena, mila jerena amin’ny maso tsy miangatra izay tena mahasoa ny fiainam-bahoaka sy mahatsara ny raharaham-pirenena amin’izay atao. Saingy tena amin’izay ve ny lalan-tsain’ny hoe mpanohitra sasany amin’izao? Eo ihany ny hoe politika lazaina na heverina na ahina ho misy ambadika hatrany fa tsy mandeha ho azy amin’izao.Ny politika dia politika, arakaraka ny fifandanjan-kery sy ny tombontsoa tadiavina na iadiana na arovana. Amin’ny fifidianana no tena ady fiady amin’izany, na toy inona fiheveran-tena sy izay lazaina; eny, na ny fiheverana sy izay lazaina ny amin’izany fifidianana izany aza. Politika io, ady fiady. Hita eo ny hoe: iza no manao inona?Rafaly Nd. L’article Politika… ady fiady sady fitady a été récupéré chez Newsmada.
Une audience foraine s’est tenue, hier, à Sabotsy-Namehana. Les registres d’état-civil ont été abordés par les autorités locales de la commune de Sabotsy-Namehana, hier. Il s’agit plus précisément d’une audience foraine. Elle s’est tenue notamment au stade Herisetra Rafanodina. Des jugements supplétifs seront ainsi remis à ceux qui ont moins de 18 ans. Ils étaient 250 à pouvoir en bénéficier, issus des 17 fokontany qui composent la commune de Sabotsy-Namehana. Ceci a été réalisé avec la collaboration du tribunal de première instance d’Antananarivo et qui a vu la présence du maire de cette localité, Avotraina Andriamosa Thomasson. Ce dernier a été entouré, à cette occasion, par ses collaborateurs et les conseillers communaux conduits par leur président. Ces dispositions ont été prises pour aider les parents d’élèves, notamment en cette période de rentrée scolaire. Faut-il rappeler que les 4 et 5 août derniers, un atelier portant sur l’état-civil et les registres d’état-civil a eu lieu à l’ « Espace Vohitra Soatoavina » Sabotsy-Namehana avec comme participants les maires et leurs adjoints ainsi que les secrétaires d’état-civil du district d’Avaradrano. Recueillis par Dominique R.L’article Sabotsy-Namehana : Audience foraine a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Takalo dinika amorom-patana: omena lanja hatrany ny feni-panoratana
Sarotra ny manoratra ny teny malagasy ! Hiompana amin’izay feni-panoratana ny teny malagasy izay ny « Takalo dinika amorom-patana », anio, manomboka amin’ny 4 ora tolakandro (oran’i Madagasikara). Ho mpisorona afo amin’izany ny Dr. Rakotoalison Fanjanirina Sylvie, mpahaiteny, mpampianatra mpikaroka eny amin’ny Onivesiten’Antananarivo sy i Heriarizao Tahadray, mpahaiteny, talen’ny famoahana foibe Fimpima. Tahaka ny nahazatra hatramin’izay, amin’ny alalan’ny « zoom » sy ny « facebook » no hanatanterahana ity « Takalo dinika amorom-patana » ity.Marihina fa tao anatin’ireny fihibohana ireny no nampitsiry ny hevitra teo anivon’ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy maneran-tany (Fimpima maneran-tany) ny hanatanterahana ny « Takalo dinika amorom-patana ». Anisan’ny tanjona tratrarina amin’izany ny hanatevenam-pahalalana sy hifanakalozam-pahaizana eo amin’ny tontolon’ny kabary. Lohahevitra maro no efa nifandimby naroson’ireo mpisorona afo rao anatin’izay fotoana nisiany izay. Nomena lanja manokana kosa ny feni-panoratana ny teny malagasy satria tohiny (fizarana II) ity tontosaina anio ity.HaRy RazafindrakotoL’article Takalo dinika amorom-patana: omena lanja hatrany ny feni-panoratana a été récupéré chez Newsmada.
Mitohy ny fanampiana avy amin’ireo malala-tanana hiadiana amin’ny valanaretina Covid-19 eto amintsika. Nanolotra fitaovana maromaro ho an’ny prefektoran’Ambatondrazaka ny orinasa japoney, Daiho. Nahitana arovava miisa 3 000 sy “gel désinfectant” maromaro karazana ary savony ireo fanampiana voaray.Nidina tany an-tampon-tanànan’Ambilobe ny minisitry ny Rano sy ny ekipany namaha ny olana momba ny rano. Paompin-drano 64 tsy nandeha teo aloha no efa mahazo rano sy afaka mamatsy rano madio ho an’ireo olona ao an-tanàna ankehitriny. Apetraka tsara ny fitantanana ny fotodrafitrasana momba ny rano, iarahana amin’ny tompon’andraikitra any an-toerana hampaharitra ny fananana iombonana.L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Voafidy ho governoran’ny Lions Club International, District 417 Ny Fanja Rakotomalala. Nandritra ny kongresin’ny Lions Club International natao tany Milan tamin’ity volana jolay 2019 ity no ahafahany mitàna io andraikitra io ao anatin’ny taom-piasàna 2019-2020. Feno 20 taona no naha mpikambana azy tao amin’ny Lions Club ary efa nitàna andraikitra maro teo anivon’ny fikambanana izy. Fantatra amin’ny sehatry ny toekarena eto Madagasikara ihany koa ny tenany ary filoha tale jeneraly ny orinasa Rio Tinto QMM. Fanamby napetraky ny Governora Ny Fanja Rakotomalala ny hoe: “Ho fanavaozana ny fahatsaram-panahy” (Pour une renaissance de la générosité). Raha ny fomba fijerin’ny Lions Club International dia mifototra amin’ny fitiavana aseho amin’ny alalan’ny fanomezan-tanana ny fahatsaram-panahy. “Efa naneho izany hatsaràm-panahy izany tamin’ny mpiara-belona nandritra ny zato taona ny fikambanana. Mivoatra hatrany anefa ny filàn’ny fiarahamonina manerana an’izao tontolo izao ka mila havaozina mifanaraka amin’ny zava-misy io fahatsaram-panahy io”, hoy Ny Fanja Rakotomalala nandritra ny lanonam-piarahabana azy teto Madagasikara, ny 13 jolay 2019. Laharam-pamehan’ny Governora mandritra ny fotoam-piasàny ny fanampiana olona miisa 1.2000.000 eo anivon’ny District 417 ka ny 20 % amin’ireo dia tanora latsaky 18 taona. Sahan’asa 3300 mifantoka amin’ny sehatra dimy: ady amin’ny hanoanana, ny diabeta, ny homamiadana mpahazo ny ankizy, ny ady amin’ny fahajambana azo sorohana, ny tontolo iainana no hotanterahana. Santionany amin’izany ny fanatanterahana ny tetikasa “banky ara-tsakafo” hiadiana amin’ny hanoanana, ny fametrahana ivon-toerana ho an’ny fanabeazana, fitiliana sy fanarahamaso ary fitsaboana ny diabeta, ny fitohizan’ny tetikasam-pampandrosoana amin’ny lafiny fitsaboana ny maso eto Madagasikara, ny fandrasaina an-tanana an’ireo tratry ny homamiadana mpahazo ny ankizy, ny fanomezan-tanana amin’ny fikajiana ny zava-boahary mba hanatsarana kalitaon’ny fahavelomana amin’ny alalan’ny fambolen-kazo mampidi-bola sy maharitra ho an’ny fiarahamonina… Marihina fa mivondrona ao anatin’ny District 417 i Madagasikara, Maurice, Mayotte, Comores, La Réunion. Klioba Lions 70 sy klioba Léos 37 no mandrafitra azy izay ahitana mpikambana miisa 1690. 42 ny klioba eto Madagasikara, 13 any amin’ny Nosy Maurice, 12 any La Réunion, 2 Mayotte ary iray any Djibouti. Nirina R. Cet article LIONS CLUB INTERNATIONAL – DISTRICT 417: Mifanaraka amin’ny zava-misy ny fanampiana ny maha olona est apparu en premier sur déliremadagascar.